Diyaarad ciidan oo Ruushku leeyahay oo siday 92 qof oo burburtay - BBC News Somali
Diyaarad ciidan oo Ruushku leeyahay oo siday 92 qof oo burburtay
Image caption Diyaaradaha Tu-154 ee qaadda sahayda ciidamadda waxay si joogto ah ugu samaysaa duulimaad Suuriya
Dayuurad ciidan oo Ruushku leeyahay oo ku jeeday wadanka Suuriya ayaa burburtay wax yar uun ka dib markii ay ka duushay magaalo xeebeedka Sochi ee dalka Ruushka, waxaana ay ku dhacday Badda Madow, sidaa waxaa xaqiijiyey wasaaradda difaaca.
Waxaa la helay burburkii diyaaradda iyo meydka hal qof, Ma jirto cid ka badbaaday shilkan oo al helay.
Wasaaradda difaaca waxay sheegtay in diyaaradda oo nooceedu ahaa Tu-154 ay siday 64 qof oo ka mid ah kooxda ugu sarreysa Muustikada ee ciidammadda Ruushka ee lagu magacaabo Alexandrov iyo sagaal wariye.
Waxay ku socotay magaaladda Latakia ee dalka Suuriya in Syria, dayuuradda ayaa ka soo duushay magaaladda Moscow waxaana ay ku degtay garoonka dayuuradaha Adler ee magaaladda Sochi si ay shidaal uga qaadato.
Waa kuwee kooxda Alexandrov?
Image caption Kooxda Bambeyda Alexandrov oo ka heesaya Magaalada Paris 2015
Kooxda Alexandrov waa kooxda rasmiga ah ee ciidammada Ruushka.
Waxaa la aasaasay sannadkii 1928 xilligii Soofiyeedka.
Kooxdu waxay ka kooban tahay fanaanniin iyo jilayaal.
Waxay magaca ay sitaan ka yimid agaasimmahoodii ugu horreeyey Alexander Vasilyevich Alexandrov, kaasi oo qoray mustikada astaanta qaranka midowgii Soofiyeei.
Waxay haystaan inay adeegsadaan magaca kooxda ciidanka cas, inkastoo kooxda wasaaradda arrimaha gudaha ee MVD ay magacaas sidoo kale adeegsdaan.
Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa daabacday liiska rakaabka diyaaradda, iyadoo 64 ka mid ah ay ka tirsanaayeen kooxda Alexandrov waxaa ka mid ahaa agaasimahoodii Valery Khalilov.
Waxaa kaloo saarnaa sagaal wariye, sideed ciidan ah, laba qof oo shaqaalaha rayidka dowladda iyo sideed shaqaalaha diyaaradda.
Image caption Agaasimaha fulinta hay'adda Fair Aid charity Elizaveta Glinka, oo la taagan madaxweyne Vladimir Putin
Si la mid ah dayuurada waxaa saarnaa Elizaveta Glinka, oo loo yaqaan Dr Liza, agaasimaha fulinta hay'add gargaar oo dhawaan ku guulaystay abaalmarin la xiririrta xuquuqda aadanaha.
Wararka ka soo baxaya deegaanka ayaa sheegaya in xaaladda duulimaad ay ahayd mid hagaagsan, waxaa la bilaabay baaritaan ku saabsan suurtagalnimadda in lagu xadbudbay badbaadada duulimaadka.
Mr Konashenkov ayaa sheegay in diyaaradda ay siday rakaab u socday inay riwaayad iyo heeso u sameeyaan ciidamadda Ruushka ee ku sugan wadanka Suuriya
Riwaayadda ayaa qorshuhu inay ka qabsoonto saldhiga ciidammada cirka The Hmeimim ee Ruushku ku leeyahay agagaaraha magaaladda Latakia.
Ruushka ayaa geysanayey weeraro xagga cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidammadda dowlada Suuriya ee la dagaalamaya xooggaga falaagadda ee doonaya inay ridaan madaxweyne Bashar al-Assad.
Tupolev-154: Russian workhorse (lafdhabarka Ruushka)
Lafdhabarka duulimaadka ciidammada Ruushka iyo midowgii Soofiyeeti.
Waxay leedahay sadex matoor oo yar yar iyo kuwa dhexe.
Waxaa la farsameeyey bartamihii sannadihii lixmaadkii, waxay shaqo bilowday 1972, waxaa dib loo casriyeey 1986 iyadoo matooro cusub iyo qalab lagu kordhiyey.
Waxaa jiray 39 shil dayuuradahan , inkastoo kuwa yar ay cilad sababtay, badankood waxaa sababay xaaladdo cimiladda la xiriirta, farsamooyin duulimaadka hawada oo liita, qaar ayaa ku burburay colaadaha Lebanon, Georgia & Afghanistan
Bishii April 2010, diyaarad Tu-154 plane ayaa ku burburtay Smolensk, galbeeedka Ruushka waxaa ku dhintay dhamaan 96 qof oo saarnaa oo uu ku jiray madaxweynihii Poland Lech Kaczynski.
Diyaarad kale oo isla noocan Tu-154, oo ay lahayd shirkadda dayuuradaha Siberian Airlines, ayaa lagu soo riday Badda madow October 2001-dii waxaa ku dhintay 78 qof.
Diyaaradda ayaa ka soo duushay magaalada Tel Aviv ee Israel waxaana ay ku jeeday Novosibirsk oo ka tirsan Ruushka, badi rakaabka ayaa ahaa Israa'iliyiin.
Ciidamadda Ukraine ayaa markii hore iska fogeeyey ku lug lahaanshaha burburkaas, balse markii dambe saraakiil ayaa qirtay in diyaarada loogu dhuftay garnyn si aan ku talogal ahayn xilli lagu jiray dhoolatus military.